Probiotics နဲ့ Prebiotics ဘာကွာလဲ........ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ » Probiotics နဲ့ Prebiotics ဘာကွာလဲ……..
Probiotics နဲ့ Prebiotics ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး နှစ်လုံးက သိပ်မကွာလှပေမယ့် တူလားဆိုတော့ မတူပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ကျန်းမာဖို့ လိုအပ်တဲ့ပုံစံချင်းကတော့ သိပ်မကွာပါဘူး။ သူတို့နှစ်ခုက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီဆိုရင် ပိုမှန်မှာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ သူတို့ နှစ်ခုဘာကွာနေလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပါမယ်။
Probiotics နဲ့ Prebiotics နှစ်မျိုးစလုံးက ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကတော့ မတူပါဘူး။
Probiotics (အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား) ဆိုတာက
Prebiotics (အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား အာဟာရ) ဆိုတာက
လူ့အစာခြေစနစ်က မချေဖျက်နိုင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်တစ်မျိုးပါ။ အစာခြေစနစ်တလျှောက်မှာရှိတဲ့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေကိုအကောင်းဆုံး အာဟာရဖြည့်ပေးပါတယ်။
Probiotics နဲ့ Prebiotics ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးလဲ………..
အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား လို့ခေါ်တဲ့ (Probiotics ) တွေက အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား အာဟာရဖြစ်တဲ့ (Prebiotics) တွေကို စားသုံးပြီး အစာခြေစနစ်ကျန်းမာစေမှုအပြင် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာစေဖို့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အူနံရံတွေကို အာဟာရဓာတ်တွေကို အကောင်းဆုံးစုပ်ယူနိုင်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို အခုလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ပေးစွမ်းပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်များလို့ လျှော့ချနေတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် တော်တော်လေးအဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။ အဝလွန်တာမျိုးမဖြစ်အောင်လည်း အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ အဝလွန်တာကို သက်သာစေဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။ Lactobacillus အမျိုးအစား အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားက ကိုယ်အလေးချိန်ကို အကောင်းဆုံးထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးကြောတွေထဲမှာ အဆီတွေပိတ်ဆို့တာမျိုးမဖြစ်အောင်လည်း အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ BMI ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ အရာတစ်မျိုးပေါ့။ လေ့လာမှုတွေအရတော့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေက ကိုယ်တွင်းက အဆီတွေကိုလျှော့ချပေးပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းညှိပေးတာပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ အစာခြေစနစ် ကျန်းမာစေဖို့လည်း အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေက အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အူနံရံတွေကို ကျန်းမာစေနိုင်ပြီး အာဟာရတွေစုပ်ယူနိုင်စေဖို့ အကောင်းဆုံးအားဖြည့်ပေးနိုင်သလို အူတွေရောင်ရမ်းတာမျိုးမဖြစ်အောင်လည်း အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အစာခြေစနစ်တလျှောက်မှာ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားအရေအတွက်ကို အကောင်းဆုံးထိန်းညှိပေးရင်း အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေပြီး နာတာရှည် အစာခြေစနစ်ပြဿနာတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားလေးတွေက အစာခြေစနစ်ကို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စေပြီး ဝမ်းချုပ်တဲ့ပြဿနာကနေ ကင်းဝေးစေမှာပါ။ လေပွတာ၊ အစာအိမ်နာတာတွေကို သက်သာစေဖို့လည်း အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။
အစာခြေစနစ် နဲ့ ဦးနှောက်က ဆက်စပ်နေတာပါ။ အစာခြေစနစ် ကျန်းမာမှ အာရုံကြောစနစ်ကျန်းမာစေနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေဖို့နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင်လည်း အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားလေးတွေကို အားကိုးလို့ရပါတယ်။ မှတ်မိနိုင်စွမ်း တိုးစေပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းစေနိုင်သလို စိတ်ဖိစီးတာနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတာကို သက်သာစေနိုင်မှာပါ။
ဒါတွေအပြင် Probiotics တွေက
အအေးမိဖျားနာတာမျိုး မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတယ်
Probiotics (အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား) တွေကို အစားအစာတိုင်းမှာတော့ မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားကြွယ်ဝတဲ့ စားစရာတွေက
Prebiotics (အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား အာဟာရ) တွေကိုတော့
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 6, 2020 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 6, 2020
Probiotics and Prebiotics: What’s the Difference? https://www.healthline.com/nutrition/probiotics-and-prebiotics Accessed Date6February 2020
What is the difference between prebiotics and probiotics? https://www.medicalnewstoday.com/articles/323490.php Accessed Date6February 2020
Prebiotics, probiotics and your health https://www.mayoclinic.org/prebiotics-probiotics-and-your-health/art-20390058 Accessed Date6February 2020